China Shuttle Mover System umzi-mveliso kunye nabavelisi |UKWAZISA
Ngokwahlukileyo kwi-AS/RS, isistim sokuhambisa isivalo sisixhobo sokwenza izinto ezintsha esine-automated ngokupheleleyo, esiqaphela ukusetyenziswa okukhulu kwendawo yokugcina impahla kwaye inokufikelela kwiimfuno eziphezulu zokungena nokuphumayo.
Umgaqo ongundoqo wokusebenza:
1. I-Inbound: Emva kokuba i-WMS ifumene ulwazi lwempahla engenayo, yabela indawo yempahla ngokusekelwe kwiimpawu zempahla, kwaye ivelise imiyalelo engenayo.I-WCS ithumela izixhobo ezinxulumeneyo ukuhambisa iimpahla ngokuzenzekelayo kwindawo echongiweyo;
2. Eziphumayo: Emva kokuba i-WMS ifumene ulwazi lwempahla ephumayo;yenza imiyalelo ephumayo ngokwendawo zempahla.I-WCS ithumela izixhobo ezinxulumene nokuthumela iimpahla ngokuzenzekelayo ukuya ekupheleni.
Ukulayisha kunye nokukhulula ngokukhululekileyo ngokuthatha indlela engaphantsi njengeyunithi yokugcina, kunye ne-main-layini njengendlela yokuthutha;ngokuhambelana noyilo lwemizila, inokwahlulwa ibe: uyilo olumacala mabini kunye noyilo oluphakathi.
□ Isishukumisi esihamba ngeenqanawa kunye neereyili zicwangciswe kumacala omabini erakhi:
· Imowudi yothutho lukanomathotholo: okokuqala kuphuma kuqala (FIFO);
· Iindlela zangaphakathi neziphumayo: icala elinye elingena ngaphakathi nangaphandle;
□ Isishukumisi esihamba ngeenqanawa kunye neereyile zilungelelaniswe kumbindi wokurhangqa:
· Imowudi yothutho lukanomathotholo: okokuqala ekuphumeni kokugqibela (FILO);
· Iindlela zangaphakathi neziphumayo: ukungena nokuphumayo kwelinye icala
1. Ukudibanisa okugqibeleleyo kokugcinwa okunzulu kunye nenkqubo yokuzenzekelayo;
2. Ukugcinwa ngokuzenzekelayo kweepalati ezininzi;
3. I-semi-automatic raido shuttle rack inokuphuculwa ngokucwangcisiweyo, ukuze idityaniswe nemveliso kunye nenkqubo yolungiselelo lokuphumeza uqhagamshelwano olungenamthungo.
4. Iimfuno eziphantsi zepateni yokwakha indawo yokugcina impahla kunye nokuphakama komgangatho ngaphakathi kwendawo yokugcina impahla;
5. Uyilo lwendawo yokugcina impahla luyaguquguquka, lunemigangatho emininzi kunye noyilo lwengingqi ukuqonda ugcino oluzenzekelayo ngokupheleleyo;
Kutshanje, i-NANJING INFORM STORAGE EQUIPMENT (GROUP) CO., LTD kunye ne-Inner Mongolia i-Chengxin Yong'an Chemical Co., Ltd. isayine isivumelwano sentsebenziswano malunga noyilo, ukuveliswa, ukufakwa kunye nokugunyaziswa kwenkqubo yokugcina impahla ezenzekelayo.Iprojekthi yamkela isisombululo senkqubo ye-shuttle mover, equlunqwe ubukhulu becala kwi-racking, i-radio shuttle, i-shuttle mover, i-elevators ezibuyelayo, ii-elevators ezitshintshayo, imigca yokuhambisa, kunye nesofthiwe.